देवता, डाक्टर र पिताजी | सीमान्त . marginal देवता, डाक्टर र पिताजी – सीमान्त . marginal
Posted on 15 Oct 2020 17 Oct 2020 by Jagadish
(सुलेख मासिक, वर्ष ७, अङ्क ६, पूर्णाङ ७३, २०७५ असोजमा प्रकाशित आत्मपरक निबन्ध)
पिताजी अहिले हामीबीच हुनुहुन्न । वि.सं. २०६३ पुस ९ गते निधन भएपछि उहाँ सम्झनामा मात्र हुनुहुन्छ । एउटा सामान्य नेपाली उहाँको जीवनी र अनुभव आमपाठकका लागि रूचिकर नहुन सक्छ । लामो कालखण्डमा मानिसका जीवनमा आएका उतारचढावलाई रङ्मसला दलेर लेखिने वर्णन सायद साहित्य हो । त्यसैले मानिसँग नजोडिएका घटना सायद साहित्य बन्न सक्दैनन् । मैले आजसम्म पढेका जाति पनि साहित्य छन् ती मानवसँग नजोडिएका छैनन् । पिताजीको जीवनमा भएका एकाध घटनाले मलाई आजसम्म पनि स्तब्ध बनाउँछ । उहाँ परलोक भएदेखि नै उहाँ र चिकित्सकबीचका परिघटना उल्लेख गरेर एउटा आलेख तयार गर्न मन लागेको थियो । पटकपटकको मेरो त्यो प्रयास पूरा हुन सकेको थिएन । यसपटक बढो सम्हेएर लेख्न सकेको छु । हाम्रा पिताजी र खासगरी हाम्रो सन्दर्भमा नेपालका केही चिकित्सकहरू देवता नै हुनुभएको छ । प्रसङ्बश ती चिकित्सकहरूको नाम पत्रपत्रिका वा अन्य मिडियामा देख्ने÷सुन्ने बित्तिकै हाम्रो परिवार नै गम्भीर हुन्छ । यो सामग्री हाम्रा पिताजीभन्दा पनि तिनै “देवता डाक्टर”लाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने मभित्रको मानवीय न्यायाधीशले मलाई पे्ररित गरेर तयार गरेको हुँ ।
पिताजी बालचन्द्र वाग्ले
वि.सं.२०४९तिरबाट पिताजीलाई घाँटीको फुडपाइमा असाध्यै दुख्ने समस्या आयो । नियमित दुख्दैनथ्यो शुरुमा हप्तापन्ध्र दिनमा एकपटक दुख्ने यो रोगलाई उहाँले रुघांश भनेर सोही बमोजिम उपचार गर्नुभयो । औपचारिक वैद्य नभएपनि उहाँ आयुर्वेदीय औषधीको पोख्त प्रगोगकर्ता हुनुहुन्थ्योे । हाम्रो घरमा गाउँका विशेष गरी बच्चा, दग्दी, प्रसुती, महिनावारी, दोष (टाइफाइडका) विरामीको निकै आवतजावत हुन्थ्यो । घरैमा आयुर्वेदीय औषधी हुन्थे । किताव पढेकै भरमा उहाँले चिकित्सकले भनेअनुसार क्षयरोगीहरूलाई तीन वा छमहिना लगाउनु पर्ने इन्जेक्शन लगाउनु हुन्थोे ।
घाँटीका दुखाइको तीखोपन र बारम्बारता ( फ्रिक्वन्सी ) बढ्दै गएपछि उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो । पहिलोपटक मलाई सम्झना भएअनुसार न्यूरोविन औषधी दिइएको थियो उहाँलाई । त्यसले केही निद्रा, लठ्ठपन र दुखाइ कम गरेको अनुभव गर्नुभएको थियो उहाँले । पछि यो औषधीले काम गरेन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सामान्य चिकित्सा विभागबाट उपचार सुरु भयो । जबसम्म दुख्दैनथ्यो उहाँलाई विरामी भनेर स्वयं चिकित्सकहरूले पत्याउनु हुन्नथ्यो । जब दुख्थ्यो उहाँलाई दुईजनाले अठ्याउनु पर्दथ्यो । एकदुईपटक डाक्टर सापहरूले यस्तो अवस्था देखेपछि उहाँलाई डा. जगदीश अग्रवालले हेर्नुभयो । मलाई पहिलेदेखि नै पिताजीको रोगबारे डा. अग्रवाललाई जानकारी गराउन मन थियो । तर त्यस्तो अवसर मिलेको थिएन । केही हप्ताको नियमित अस्पताल आतेजातेपछि तनहुँ जामुनेका डा. बुद्धिबहादुर थापाले डा. अग्रवालसँग भेटाइ दिनुभएको थियो । दुईतीनपटक जाँच्दासम्म डा. (थापासँग हाम्रो “क्षेत्रीय” र चिनजानको साइनो बसेको थियो । हामी पनि तनहुँको, जामुनेका प्रतिष्ठित पण्डित दीनानाथ काफ्ले (पिताजीका भानिज) लाई डा. थापाले अत्यन्त सम्मान गर्नुहुँदो रहेछ । त्यो नाता र बिरामीको अवस्था देखेर डा. थापाले डा. अग्रवालसम्म हाम्रो केश पु¥याउनु भयो । डा.अग्रवालले यो केशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भन्नुभयो– तपाईको बाको नयाँ प्रविधिले उपचार गर्नुपर्दछ । बेलायतबाट एकजना विशेषज्ञ आउदै छन् भन्दै उहाँले मलाई सम्पर्कमा बस्न भन्नुभयो । म पटकपटक उहाँ छेउ पुग्थेँ । पछिपछि त चिन्न थाल्नु भयो । पिताजीको घाँटी अघोर दुख्न थालेको थियो, खानाखान हुँदैनथ्यो । वेलायतबाट डाक्टर कहिले आउने कहिले उपचार हुने । हामी अधीर थियौ ।
एकदिन बेलायती डा. मार्क चर्चिलसँग डा. अग्रवालले भेटाउनु भयो । उहाँहरूले न्यूरल्जिया यस्तै केही शब्द प्रयोग गरी पेन मेनेजमेन्ट अन्तरगर्त उपचार गर्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भएको मैल बुझेँ । डाक्टर त्रय, अग्रवाल, बुद्धिबहादुर र चर्चिलले निष्कर्ष निकाल्नु भएछ– एब्सुलुट अल्कोहलले पिताजीको दुखेको नशामा इन्जेक्सन दिने । मलाई यो औषधी खोज्न भन्नुभयो । काठमाडौभर कतै पाइएन त्यो कुरा डा. अग्रवाल, बुद्धिबहादुर र चर्चिललाई बताएपछि फेरि उपाय निकाल्नु भएछ सम्भवतः सोडियम र के–के मिसाएर दुखेकै नशामा इन्जेक्शन दिने । यसोगर्दा दुखेको नशामै त्यो औषधी नपरेर अन्यत्र परेमा मस्तिष्क वा मुटुमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्न सक्दोरहेछ । औषधी डाक्टर सापहरूले नै व्यवस्था गर्नुभयो । डा. चर्चिलले इन्जेक्शन दिएर भ्याएको केही क्षणपछि सामान्य लठ्ठपनबाट पिताजी पूर्ण होस्मा आउनुभयो । केहीबेर अघिसम्म असाध्यै दुखेको घाँटी छाम्दै पिताले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो– ‘मेरो दुखाइ के भयो ।’ झण्डै सातफिट अग्ला चर्चिल, अग्रवाल र थापा डाक्टर सापहरूको अनुहारमा देखिएको खुशी साँचै पेशाप्रतिको सन्तुष्टि थियो । हामी घर फर्कदै गर्दा डा. अग्रवालले भन्नुभएको थियो– अब तपाईको बुवालाई कम्तिमा पनि एकवर्ष यो दुखाइ बल्झने छैन । हामीलाई एकवर्ष धेरै लामो लाग्यो । घरमा सबै दङ्ग । पिताजी त आश्चर्यचकित । दुखाइ चट ।
उपचारको तीन वर्षपछि मात्र पिताजीलाई दुखाइ बल्झियो । चर्चिल वेलायत, डा. बुद्धि थापा पोखरा सरुवा जानुभयो । डा.अग्रवाल टिचिङ् अस्पतालमै । म उहाँहरू कतै जानुहुन्छ वा सरुवा हुन्छ कि भनेर निकै सरोकार राख्देँ उहाँहरूउपर । यसपटक डा. अग्रवालले नेपालमा यस्तो काम डा. स्वाँरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो । डा. स्वाँरलाई खोज्न म र दाजु कुलचन्द्र वाग्ले विशालनगर हाडीगाँउतिर गयौं । बिहानभरको खोजाइपछि उहाँको घर भेटियो । पिताजीका सबै मेडिकल लिटरेचर हेरेर उहाँले यो उपचारका बारेमा केही बताइदिनुभयो– यो पेन(दुखाइ) मेनेजमेन्ट हो, अक्सर खेलाडीहरूलाई तुरुन्त खेलमा फर्काउन दुखेको ठाँउमा इन्जेक्शन दिइन्छ । त्यो औषधीको लठ्याइले पीडितले दुखेको अनुभव गर्दैन, आदि इत्यादि । उहाँले यसका लागि नेपालका “उत्तम व्यक्ति डा.नीलमणि शर्मा हुन् उनलाई खोज्नुहोस्, सम्भवतः ऊ जोरपाटी अस्पतालमा छ” भन्नुभयो । दुई दिनको प्रयासपछि जोरपाटी अस्पतालमा कार्यरत डा. नीलमणिसँग भेटेर मैले सबै कुरा बतााएँ । उहाँले पिताजीको उपचार गरिदिनु भयो । यसपटकको उपचारले करिब एकवर्ष दुखेन । त्यसपछि छमहिना वर्षदिनको अन्तरालमा डा.नीलमणीलाई भेट्थ्यौं तर न त पिताजी न मैले उहाँलाई राम्ररी चिन्यौं । उहाँ सधँ अपरेशनका बेला डाक्टरले लगाउने हरियो टोपी र मास्कमा हुनुहुन्थ्यो । पटकपटकको भेट र उपचारले गर्दा पिताजी भन्नुहुन्थो–डा. नीलमणि त मेरालागि साँचै नीलमणि हुन् । जोरपाटी अस्पतालमार्फत एक पैसा पनि (अस्पताल वा डाक्टर) नलागी हामीले यो उपचार पायौं । पिताजीले अति नै कर गर्नुभो–‘बाबु एकजोर राम्रो सुटपाइन्टको कपडा किनिदेओ, एउटा असल सुटकेसमा राखेर म नीलमणि डाक्टरलाई उपहार दिन्छु ।’ यो कुरा हामीलाई पनि ठिकै लाग्यो । डा. नीलमणि सापको उपचारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने यो नै राम्रो उपाय हो । विरामीको चाहनालाई संवेदनशील भएर हेरिदो रहेछ तर पनि एकपटक डा.सापको पूर्वअनुमति लिऔं भन्ने निर्णय गरियो । यतिखेरसम्म उहाँ जोरपाटी मेडिकल कलेज छाडेर बि.एण्ड बिमा कार्यरत हुनुहुन्थो । मैले बि.एण्ड बिमा गएर उहाँसँग पिताजीको इच्छा सुनाउँदै यस्तो अनुमति लिन खोजेँ । त्यसपटक बिना मास्क र हरियो टोपी बाहिर आउनु भएकाले यसैपटक मात्र मैले उहाँलाई पूरा अनुहारमा देखें । हसिलो डाक्टर, कल्साम्दो कालो, चिल्लो अनुहार, कताकता महादेवको जस्ता नीलोकालो अनुहारको छाला, मलाई अहिले पनि उहाँको याद आइरहन्छ । उहाँले मेरो कुरा सिधै अस्वीकार गर्नुभयो । पिताजीलाई सोधेर केही भएमा यही (बि.एण्ड बि) ल्याउनु भन्नुभयो । त्यसपटक दुख्न अलिअलि सुरु गर्दैगर्दा हामी बि.एण्ड बि गयौं । पिताजी मजैले गफ गर्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले पनि सबै कुरा नछिचोलेर “हजुरले केही उपहार लिइदिनुभयो भने मलाई सन्तुष्टि हुने थियो” भन्नुभयो तर डाक्टर नीलमणि सापले यसपटक पनि पिताजीको प्रस्तावमा धन्यवाद मात्र भनिदिनुभयो । हाँसेर अस्वीकार गरिदिनुभयो ।
यस्ता डा. नीलमणि शर्मालाई उहाँकै निवास अगाडि धापासीमा हतियारधारीले आक्रमण गरेको खबर सुन्नुप¥यो । हामी पनि धापासी नै बस्ने भएकाले, म आँखाभरी आशुँ बनाएर उहाँको घरतिर गएँ । उहाँलाई अस्पताल लगियो भन्ने जानकारी सडकमा उभिएकाबाट पाएँ तर उहाँका बारेमा थप केही थाह भएन । यो कुरा हाम्रा पिताजीले सुनेको भए कति रूनुहुन्थो होला । यही घटनाको सेरोफेरोमा डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी अपहरण भयो । उहाँ कति बेचैन हुनुभयो होला । मलाई सधैं एउटा सम्भावित दुस्परिणामले झक्झक्याइ रहन्थो– कि कतै यस्तै घटनाका कारण डा. नीलमणि वा डा. देवकोटा नेपालबाट पलायन भएको समाचार लेख्नु वा पढ्नु पर्ने त होइन ? यदि यसोभयो भने यो देश अपहरणकारी र लुटेराको पञ्जामा परेको ठहर्ने छ । डा. देवकोटासँग उपचारको क्रममा पिताजीको एकपटक भेट भएको हो तर डा. देवकोटाको बुवा होमनाथ कविराज (गण्डकी क्षेत्रका प्रख्यात कविराज) र हाम्रा पिताजीको गजवको संयोग छ । हाम्री आमासँग विवाह गर्नुअघि पिताजी बेसरी थलिनुभएछ पेटको रोगले । भन्नुहुन्थो— सङ्ग्रहिडी भन्छन् यस्ता रोगलाई । आफन्त लगाएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रैका नामी र चर्चित कविराज होमनाथ देवकोटा (डा.उपेन्द्रका पिता) लाई घरमा बोलाएर उपचार गराएपछि पिताजीलाई निको भएछ । त्यसपछि विवाह गर्नेबेलामा हजुरबा चिरञ्जीवी पोखरेल र मामा गोबद्र्धन पोखरेल (काँगे्रसका नेता) बीच ठूलो विवाद भएछ । मामा गोबद्र्धन पोखरेल भन्नुहुँदोरहेछ “यो केटो रोगी र मत्तु पनि छ ।” बैनीलाई धोका हुन्छ । हजुरबा भन्नुहुदोरहेछ– “यो केटाको प्रशस्त सम्पत्ति छ, भकारीको आडा लाएर धानको भात खान पाउँछे छोरीले ।” अन्तिममा दुबैको सहमति भएछ–पिताजीको रोगबारे होमनाथ कविराजसँग सल्लाह गरी निर्णय गर्ने । होमनाथ कविराजले “मैले उपचार गरेको रोग बल्झिएर यो मर्दैन, म लेखेर दिनसक्छु” भनेपछि हाम्रा पिताजीको पछिल्लो विबाह पोखरेल परिवारमा मुहुनमाया सँगभयो । यसरी हामी डा. उपेन्द्र देवकोटालाई टाढाबाट एकोहोरो आस्था र सम्मान गर्दथ्यौं । पछिल्लोपटक उहाँ आफै विरामी पर्नुभएको समाचारले म निकै गम्भीर भएको थिएँ । डा.देवकोटा र उहाँको न्यूरो अस्पतालसँगका तीतामिठा अनुभव छन् । ती अन्य सन्दर्भमा लेखौंला ।
पिताजी बालचन्द्र वाग्ले र वहाँको प्रकाशित पुस्तकको आवरण पृष्ठ
पिताजीलाई अब तनहुँ बस्न सम्भव भएन । घरीघरी दुख्न थाल्यो । बि. एण्ड बि जादैगर्दा डा. नीलमणिले म फोन गरिदिउँला भन्दै टिचिङ अस्पतालका डा. मरहठ्ठालाई मेट्न भन्नुभयो । साह्रै संवेदनशील डा. मोदराज मरहठ्ठा (गोरखा) मार्फत डा. रोशनी अमात्य र डा. जेजु (उच्चरण नमिल्न पनि सक्छ) सँग भेटभयो । अन्तिम समयसम्म पनि डा. अमात्य र डा. मरहठ्ठाले पिताजीको उपचार गरिदिनुभयो ।
एक वर्ष दशैको बेला घरमा मासुको पर्जपखान थियो । पिताजीलाई मासु निकै खानुपर्ने तर घाँटीको दुखाइले खान सक्नुभएन । उहाँ करिव भोकै । म यो कुरा लिएर डा. अमात्यकहाँ गएँ, पिताको वेदना सुनाउदै गर्दा म रोएछु । पछि मलाई शर्म पनि लाग्यो । मेरो विवाह भइसकेको थियो । शायद छोरी जन्मेकी थिई । डा. अमात्यले मलाई सम्हाल्नुभयो । दशैंको विदामा पनि उहाँ र डा. मरहठ्ठाले पिताजीको उपचार गरिदिनु भयो । डा. अमात्यलाई पिताजीले आमा भन्नुहुन्थो । डा. अमात्य ‘म तपाईंको छोरीजस्तो मानिसलाई आमा नभन्नोस्’ भन्नुहुन्थो । पिताजी भन्नुहुन्थो–आमा भनेको धरती हो, धरतीले आफूलाई जतिसुकै पीडा भए पनि अरुलाई सुख दिन्छ, मैले तपाईंबाट सुख पाएकाले मेरालागि तपाई धर्ती हो । आमा हो । कवि, हाम्रा पिताजीको वाणि शक्तिशाली र अचम्मको हुन्थ्यो । डा. अमात्य तर्क गर्न सक्नुहुन्नथो । मिठो हाँसो हाँसिदिनु हुन्थो । चाहे नेपाल मेडिकल कलेज, बि एण्ड बि वा टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज विरामीको नाम दर्ता गराउन लाग्ने दस्तुर बाहेक कुनै पनि डाक्टर वा औषधी खर्च लागेन पिताजीलाई । पछिपछि त उहाँलाई दुख्न पनि कम भो । उहाँको निधन यसका कारणले नभई सामान्य बुढ्ैयालीमा ८७ वर्षको उमेरमा भयो । यसैबीच एकपटक टिचिङ् अस्पताल महाराजगञ्ज पुुग्दा डा. अमात्यले भन्नुभएको थियो–तपाईंको बाबाको केशपछि हामीले यो अस्पतालमा पेन मेनेजमेन्ट शाखा सञ्चालन गरेका छौं । यसलाई कतिपय शल्यक्रियाको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
सबै डाक्टर सापहरू हाम्रा लागि देवता समान हुनुहुन्छ । यसोभन्दा अति भावुकता वा अतिरञ्जना पनि हुनसक्छ । यदि कष्टको सागर पार लगाउने कृष्ण, राम वा साइबाबा देवता हुन सक्दछन् भने । हाम्रा पिताजीको अति दुखाइ निको पारेर कतिपय डाक्टर सापहरूले हामीलाई दुःखको भवसागर पार लगाइदिनु भएकाले उहाँहरूलाई देवता भन्नु अतिरञ्जना नहोला । पिताजीको उपचारमा अन्य केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । सबैलाई पहिचान गर्न सकिन । सम्झनाको भरमा लेखेकाले यस सन्दर्भमा छुट्नै नहुने केही चिकित्सकको नाम नाम छुट्न गएकोमा माफी माग्नु लेखकीय धर्म सम्झेको छु ।
19 May 2018 16 Oct 2020
Posted in कवि बालचन्द्र वाग्लेTagged कवि बालचन्द्र वाग्ले, जयपृथ्वी बहादुर सिंह, टीकानिधि वाग्ले, तनहुँ जिल्ला क्यामिन गाविस-व्यास नगरपालिका, त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले, धनमाया पोखरेल, नरत्तोप्रकाश, बालचन्द्र वाग्ले, बीपी कोइराला महाकाव्य, महाकवि देवकोटा-खण्डकाव्य २०४२, मोरङ् विजयपुर, राजा देवीजङ बहादुर सिंह, Balachandra wagle, Tribhuvan Chandra wagle2 Comments
Previous Postहाँस्छ खुसी | कविताNext Postरानीपोखरी हाँस्दा किन रुन्छ खुलामञ्च!
2 thoughts on “देवता, डाक्टर र पिताजी”
Rameshananda Vaidya says:
16 Oct 2020 at 2:58 pm
यति राम्रो र मननयोग्य लेखोट पढ्न पाउँदा धन्य भएँ। साधुवाद।
Jagadish Wagle for INCOMESCO says:
धन्यवाद हजुर ! आभार छौं ।
रोजगारी मिल्ला तर घरवारै बिग्रियो भने के हुन्छ? रेमिट्यान्सले धनी भएका देश र समाजले बिछोडको पीडालाई तथ्याङ्कमा घटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बसालेका छैनन्। आम्दानी देखाउने तर समाजमा भएको नोक्सान वा क्षतिबारे तथ्याङ्कलाई किन मौन राखियो ?यसो हुनु नियतवश हो वा नवउदारवादको निकृष्टता? पछिल्लो समय, चितवनका सन्तोषले १३ वर्षसम्म ५५ डिग्री तापाक्रममा परिश्रम गरेर पठाएको सबै […]
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पूर्वमहाराजधीराज ज्ञानेन्द्र शाह प्रति उच्च सम्मान रहेको बताएका छन्। भट्टराईले शाहले समय दिए उहाँसँग छलफल गर्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्। केही समय अघि वरिष्ठ पत्रकार भूषण दाहाल सँग कुरा गर्दै उनले अत्यन्तै हार्दिकताका साथ विगतका कुरा बारे आंफ्नो मन भित्रका कुरा पोखेका थिए। भट्टराईबाट अपेक्षा नै […]
आज नेपालले जे समस्या भोग्दै छ त्यो राज्य सिर्जित समस्या हो । प्रदुषण, दुर्घटनाग्रस्त यातायात, असुरक्षित आवास, विकृत बजारजस्ता संकट यति विकराल भईसकेका छन् कि त्यसको समाधान राज्यको एकाग्र प्रतिवद्धता बिना संभव देखिन्न। तर प्रजातन्त्रमा स्वभाविक मानिने बहु विचारलाई एकल उद्देश्यकालागि सर्वसम्मत गराउन सक्ने नेतृत्वको अभावमा समस्याको समाधान पनि सहज हुँदैन। प्रजातन्त्रको आवश्यकता सतत् विकासकालागि […]
केही महिना अघि नेपालका नौ-दश कक्षामा अध्ययनरत केही वालवालिकालाई सोधेको थिएँ कि- ग्रेटा थनबर्गको नाम सुनेको छौ? कसैले नामसम्म सुनेको भने भने धेरैले त नसुनेको बताए। यही प्रश्नलाई कलेजस्तरका नानी बाबुहरूसँग पनि सोधें। उत्तर पहिलाको जस्तै थियो। त्यसपछि यही प्रश्न बाबु-आमा भइसकेका दाजु-भाइहरूलाई सोध्दा पनि उत्तर त्यस्तै आयो। नौ-दश कक्षामा अध्ययनरत वालवालिकालाई ग्रेटा थनबर्गका बारेमा […]
खाद्य सुरक्षा र विकासको प्रतिफल सबैकालागि; सँधैकाल…
शहरिकरण : बिकराल काठमाण्डौ
पोष्ट वर्गिकरण Select Category अडियो किताव (1) अतिथी (2) अनसन (1) अनुसन्धान (1) अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति (4) अभिमत (6) अमेरिका (25) असमानता (14) आन्तरिक श्रोत (5) आम्दानी (6) आवास (1) उध्द्योग (6) एन.जि.ओ. (4) एनआरएन (4) कथा (1) कवि बालचन्द्र वाग्ले (2) कविता (39) कृषि (8) खाध्य सुरक्षा (2) खेलकूद (3) गीता महाभारत (2) ग्लोबलाइजेशन (4) चाइना (17) चुनाव (16) छिमेक (10) जल-बिद्युत (3) जलश्रोत (6) दस्तावेज (10) देवताधर्म (4) नयाँँशक्ती (9) नशा (3) नाकावन्दी (26) निजिकरण (5) नेपाल (108) नेपाली कङ्रेस (22) नोबेल पुरस्कार (3) न्यायपालिका (3) पत्रकारिता (3) पर्यटन (2) प्रजातन्त्र (5) प्राकृतिक प्रकोप (2) बिकास (77) बी पी कोइराला (16) बैङ्क (4) ब्यापार युद्ध (2) भारत (32) भाषा (3) मधेश (11) महाभूकम्प (4) यातायात (1) राजनीति (18) राजसंस्था (1) रामकाजी कोने (1) लागु पदार्थ (1) विविध (13) विश्व पर्यावरण (2) वेलायत (18) वैदेशिक रोजगार (3) शब्दकोश (1) संगित (1) संगित (1) संघियता (19) संचार (6) संबिधान (24) सत्याग्रह (2) समाज (3) समाजवाद (9) साहित्य (21)
मासिक संग्राहलय Select Month Sep 2021 (1) Aug 2021 (2) Jun 2021 (1) Apr 2021 (1) Mar 2021 (1) Feb 2021 (2) Jan 2021 (1) Oct 2020 (2) Aug 2020 (1) Jun 2020 (5) Apr 2020 (2) Mar 2020 (1) Dec 2019 (4) Nov 2019 (2) Sep 2019 (1) Aug 2019 (3) Jul 2019 (2) Jun 2019 (1) May 2019 (5) Apr 2019 (2) Feb 2019 (1) Jan 2019 (1) Dec 2018 (4) Nov 2018 (3) Aug 2018 (1) May 2018 (6) Mar 2018 (1) Feb 2018 (1) Jan 2018 (4) Dec 2017 (1) Aug 2017 (6) Jul 2017 (9) Jun 2017 (2) Apr 2017 (2) Mar 2017 (4) Feb 2017 (2) Dec 2016 (3) Nov 2016 (5) Oct 2016 (1) Sep 2016 (4) Aug 2016 (12) Jul 2016 (3) Jun 2016 (8) May 2016 (11) Apr 2016 (6) Mar 2016 (12) Feb 2016 (13) Jan 2016 (17) Dec 2015 (20) Nov 2015 (14) Oct 2015 (14) Sep 2015 (7) Aug 2015 (8) Jul 2015 (7) Jun 2015 (3) May 2015 (4) Apr 2015 (4) Mar 2015 (4) Feb 2015 (2) Jan 2015 (5) Dec 2014 (7) Nov 2014 (4)